version 0.9.6.0 – အရှည်ဆုံးရက်လွန်, အတိုဆုံးနေ့၌ပြန်လွတ်လာ
ဒီဇင်ဘာလ 21, 2014 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှုaComment Leave
ဒီဗားရှင်းသစ်ကိုတကျိပ်ဘာသာစကားများကထပ်ပြောသည် Google ကမကြာသေးမီကဘာသာပြန်ဆိုထည့်သွင်းခဲ့သည်. လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင်အ Transposh သို့တိတ်တဆိတ်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသတိပေးတာနဲ့ bug တွေကြောင့်တိုက်ပွဲတွေအပေါ်အာရုံစူးစိုက်.
တစ်ဦးကမိမိကိုမိမိတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်, Martus ဆော့ဖ်ဝဲကိုပြောင်းလဲတော်မမူလျှင်, bug တွေကြောင့်ဘယ်လိုအတွက်တိတ်တဆိတ်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြထားပြီး? အလိုအဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါ, အဲဒီဆော့ဗ်ဝဲဟာလေဟာနယ်တွင်မတည်ရှိပါဘူး, အမှုအရာရှိသမျှတို့သည်အချိန်ကိုပြောင်းလဲရန်, PHP ကို​​ဗားရှင်းသစ်များအချို့သောအသုံးပြုသူများသည်နှောင့်အယှက်ပေးသောတင်းကျပ်တဲ့သတိပေးချက်များကိုထည့်သွင်း, wordpress ကိုနှင့်တခြားဆော့ဗ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းအတွက်အသစ်ဖြန့်ချိရှိခဲ့သည်, အဖြစ်အတိုင်းအဆမဲ့က Google translate အင်ဂျင်ကိုဖို့အတွက်ပြောင်းလဲ. ထိုအပြောင်းအလဲများသည်လက်ရှိ code ကိုကိုင်တွယ်ရန်မတတ်နိုင်သောအခြေအနေများဖန်တီး, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဒီဗားရှင်းသစ်ကိုနဲနဲပိုပြီးလုပ်နေတယ်နိုင်စွမ်းဖြစ်လိမ့်မည်ဆန္ဒရှိ.
အခြားသစ်ကိုအရာတွေ Yoast SEO ဆိုသည်မှာ Sitemap ပေါင်းစည်းရေးပါဝင်သည် (သင်က patch ရန်လိုအပ်ပါတယ်, ညွှန်ကြားချက်များ code က၌ရှိကြ၏).
အသုံးမကျအော်တိုဘာသာပြန်ချက်များကိုဖယ်ရှားရန်တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့ feature ကို (ထိုဘာသာပြန်ချက်များကိုမူရင်းကြိုးတန်းတူဘယ်မှာရှိ, အချို့ဆိုဒ်များကို Google ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လာသောအခါဖြစ်ပျက်)
ပိုပစ္စည်းပစ္စယ, ထို readme.txt ဖိုင်သင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့တတ်၏.